Wargeyska Standard: Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo lagu xusay fadeexad ku saabsan dahab been abuur ah - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Standard Digital
Image caption Madaxweynaha Kenya ayaa magaciisa lagu xusay fadeexad uu baaritaankeeda socdo
Magacyada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga ayaa lagu xusay fadeexad ku saabsan dahab been abuur ah oo laga iibiyay qof ka tirsan boqortooyada Imaaraadka Carabta, sida ay shaaciyeen qaar ka mid ah wargeysyada kasoo baxa Kenya, sida Standard iyo The Star.
Maxaad ka ogtahay dahabka Soomaaliya u yaalla Mareykanka?
Image caption Moses Wetangula
"Raila ayaa madaxweynaha la kulmay si uu arrintan ugala hadlo, wuuna u sharraxay, kadib madaxweynahana wuxuu wacay wasiirka", erayadaas ayaa ka mid ah hadalladii uu codka ku dhahayay Wetangula.
Afhayeenka madaxtooyada Kanze Dena ayaa wargeyska Standard ku yidhi: "Ma aanan maqlin, mana arkin, marka waxba kama dhihi karo".
Image caption Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto ayaa difaacay Mr Kenyatta
Waxay sidoo kale sheegeen in wasiirka arrimaha gudaha Fred Matiang'' ay ka doonayaan inuu faahfaahin ka siiyo sida dalka looga ilaalinayo soo galitaanka dahabka been abuurka ah.
Philip Etale oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga ODM ee uu Raila Odinga hoggaamiyo ayaa sidoo kale been abuur ku tilmaamay arrintaas, waxa uuna sheegay ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinka uusan ka qeyb qaadanin qandaraaska ku saabsan dahabka been abuurka ah.